Dowladda oo Muqdisho ku soo bandhigtay howl aan hore loo arag
Home » WARARKA MAANTA » Dowladda oo Muqdisho ku soo bandhigtay howl aan hore loo arag	Dowladda oo Muqdisho ku soo bandhigtay howl aan hore loo arag
19/04/2017	1,487 Views Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay maanta soo bandhigtay howlqabad aan hore loo arag, taas oo lagu sheegay in ay qeyb ka tahay waxqabadka billowga ah ee dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul-wasaare-kuxigeenka dowladda, wasiirro, xildhibaanno iyo diblumaasiyiin shisheeye ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu daahfurayay xarun cusub oo ka shaqaynaysa howlaha gargaarka.
Ra’iisul-wasaaradda-kuxigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furitaanka xaruntan ku tilmaamay daahfurka waxqabadyo waaweyn oo ay dowladdu xaqiijin doonto.
Wasiiradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka marwo Maryan Qaasim Axmed ayaa hadal ay ka jeedisay munaasabadda lagu daahfurayay xarunta waxa ay ku sheegtay in hirgalinta xaruntan ay qeyb ka tahay dadaallada lagu dardargelinayo howlaha samafalka, looguna diyaargaroobayo wax-ka-qabashada dhibaatooyinka dabiiciga ah ee soo foodsaara bulshada.
Xarunta cusub ayaa waxa ay hoos tegaysaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo iyada lafteeda ah wasaarad ku cusub xukuumadda Soomaaliya, waxaana la filayaa in xaruntu ay xoogga saarto isku-dubbaridka howlaha gargaarka.
Drs. Maryan Qaasim ayaa hoosta ka xarriiqday in xaruntan cusub ay diiradda saari doonto sidii looga gudbi lahaa isku-dhex-yaac iyo nidaam-darro lagu dhaliilo howlaha gargaarka ee ay hay’adaha iyo dadka samafalayaasha ah u sameeyaan dadka ku dhibaatooba musiibooyinka dabiiciga ah.
Ra’iisul-wasaare-kuxigeenka Soomaaliya ayaa ku booriyay xarunta cusub iyo wasaaradda gargaarkaba in ay dadaal badan geliyaan sidii loo diyaarin lahaa qorshayaal looga faa’ideysanayo kheyraadka dabiiciga ah, loogana sii gaashaamanayo musiibooyinka ay abaaruhu ku jiraan, si looga gudbo baraarugga soo daaha ee yimaada marka musiibooyinka lagu baaba’o.
Previous: Jawaari oo war ay ku qancaan u sheegay xildhibaannada diiddan Imaaraadka
Next: Wax badan ka ogow qarax maanta mas’uuliyiin lala beegsaday